IRD Encourages People to Pay Tax Via Online | Myanmar Business Today
HomeBusinessIRD Encourages People to Pay Tax Via Online
Internal Revenue Department urged taxpayers to pay tax using e-payment methods instead of paying taxes in person.
It has been working with m-Banking, e-Banking, i-Banking, and mobile payment services to enable taxpayers to make the tax payment easily while staying safe by avoiding crowds.
To pay tax, users need to go to IRD Website’s online payment link, Start Your Tax, and make tax payments using MPU Corporate Debit Card or online payment services provided by CB Bank, AYA Bank, UAB Bank, and KBZ Bank.
Taxpayers, who have obtained Taxpayer Identification Number (TIN), can also make payment using MAB Bank’s mobile banking starting from July 15.
Paying tax in Myanmar before requiredastack of paperwork and hours of manpower lining up and filling forms to pay tax leading toalower number of taxpayers. The government is trying to encourage more people to pay tax by relaxing procedures, paperwork, and payment methods.
အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ဘဏ်များသို့ ကိုယ်တိုင်(သို့)ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေသားများ ချက်လက်မှတ်များ သွားရောက်ပေးသွင်းရမည့်အစား အီလက်ထရွန်နစ်ငွေ ပေးချေမှုစနစ်များအသုံးပြု၍ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အခွန်ငွေများကို ပေးဆောင်ကြရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက တိုက်တွန်းထားသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်ရှိကူးစက်ပြန့်ပွားလျက် ရှိသော COVID-19 အကာအကွယ်ဖြစ်စေရေးအတွက် အခွန်ငွေပေးသွင်းခြင်း ရောဂါကို တတ်နိုင်သမျှ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်များကို အသုံးပြုကာ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရန် m-Banking, e-Banking, i-Banking စနစ်များနှင့်မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ Mobile Payment စနစ်များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် IRD Website (www.ird.gov.mm)၏ Start Your Tax Online Payment Link သို့ ဝင်၍ MPU Corporate Debit Card အသုံးပြုကာ Online မှ အခွန်ပေးသွင်းခြင်းအပြင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များဖြစ်သော သမဝါယမဘဏ် လီမိတက် (CB bank)၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် (AYA Bank)၊ ယူအေဘီဘဏ်လီမိတက်(UAB bank) နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် (KBZ Bank) တို့၏ အီလက်ထရွန်နစ်ငွေပေးချေမှု စနစ်များ ကိုအသုံးပြု၍လည်း အခွန်ပေးဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှစတင် ၍ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်(TIN)ရရှိပြီးသော အခွန်ထမ်းများသည် မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် ဘဏ်လီမိတက် (MAB Bank) ၏ MAB Mobile Banking စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အခွန်ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
Previous articleDoing Business in Myanmar
Next articleA $180 Mln Water Treatment Plant to Be Implemented